हारबाट पाठ सिकेका प्रचण्ड र बाबुराम र फेरि मिल्न सक्लान् त ? यस्तो छ सम्भावना | Nepal First Dalit Online News Portal: www.dalitonline.com
हारबाट पाठ सिकेका प्रचण्ड र बाबुराम र फेरि मिल्न सक्लान् त ? यस्तो छ सम्भावना
काठमाडौं ३०,असार । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएको माओवादीदेखि अझै क्रान्ति आवश्यकु रहेको भन्दै अघि बढेका माओवादी घटकसम्म अहिले गम्भीरु समीक्षामा जुटेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न नसकेपछि माओवादी घटक यसरी समीक्षामा लागेका हुन् ।
माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको पहिचान अब रहने कि नरहने भन्ने स्तरसम्मको बहसमा जुटेको नेताहरूले बताउन थालेका छन् । माओवादी केन्द्रमा संसद्वादी शक्तिभन्दा आफूहरू कुन अर्थमा फरक रह्यो भन्ने बहस उठ्न थालेको छ । नेकपामा निर्वाचनले ुप्रतिक्रियावादी सत्ताु झन् सुदृढ भएको भन्ने बहस सुरु भएको छ । माओवादी केन्द्र, क्रान्तिकारी माओवादी, नयाँ शक्ति निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । नेकपाले भने निर्वाचन बहिष्कारको नीति अवलम्बन गरेको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल९डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका पार्टीले संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिस्पर्धा, मोहन वैद्यले मात्र उपयोग र नेत्रविक्रम चन्दले निर्वाचन खारेजीको रणनीतिका रूपमा यसलाई व्याख्या गरेका थिए । निर्वाचनमा न दाहाल९भट्टराई नेतृत्वका पार्टीले अपेक्षित जित हासिल गर्न सके न त चन्दको पार्टीले भनेझैं निर्वाचन खारेज हुन सक्यो । कुनै पनि घटकको अपेक्षित रणनीति पूरा हुन नसकेपछि गम्भीर समीक्षामा जुटेको नेताहरू बताउँछन्। अन्नपूर्णपोष्टमा समाचार छ ।